Wine ဖြင့် Linux မှ World of Warcraft Pandaria ကိုကစားပါ Linux မှ
Wine နှင့်အတူ Linux မှ World of Warcraft Pandaria ကိုကစားပါ
ကျွန်ုပ်သည်ဂိမ်းများစွာကစားနေသူတစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များကဲ့သို့ငါ့လက်များကိုဖြတ်သန်းသွားသောမည်သည့်ဂိမ်းမဆိုအရည်ပျော်လုနီးပါးဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်အတွက်အချိန်သိပ်မရှိတော့ပါ။ သို့သော် ... အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းစိတ် ၀ င်စားစေသည့်ဂိမ်းတစ်ခုရှိပါသည်။ Warcraft ၏ကမ္ဘာ့ဖလား
1 Linux ပေါ်မှာ World of Warcraft ကစားနည်း
Linux ပေါ်မှာ World of Warcraft ကစားနည်း
အသေးစိတ်ကတော့ငါ Windows ကိုမသုံးတာပဲ။ WoW ကို Linux ပေါ်မှာဘယ်လိုကစားမလဲ။ ...
ဒီနေရာတွင်သင့်အားသက်သေပြနိုင်ပြီးအလွန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုပြသပါမည် WoW နှင့်အတူ Linux ပေါ်ရှိ WoW Pandaria ၏မြူ.
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် Wine ကိုအရင် install ရမည်။ ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရမည်။
ArchLinux ကိုသုံးသောသူများသည် /etc/pacman.conf ရှိအောက်ပါလိုင်းများကိုမကျေမနပ်ဖြစ်စေပြီး multilib repos ကိုသက်ဝင်စေရမည်။
Ubuntu (သို့) Debian အသုံးပြုသူများ၊ ကျွန်ုပ် Wine PPA ကိုထည့်သွင်းရန်အကြံပြုပါသည်။
ထည့်သွင်းရန်၊ Arch ထဲတွင်လွယ်ကူပါသည်။
Ubuntu (သို့) Debian တွင်၊ PPA repository ကိုထည့်ပြီး indexes များကိုအသစ်ပြန်လုပ်ပြီးနောက်၊
2. terminal ကိုဖွင့်ပြီ စိုင်းထီးဆိုင်, ကျွန်တော်တို့ Wine ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို configure လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ graphical application ။ ကျနော်တို့ tab ကိုသာစစ်ဆေးနိုင်ရန်ကဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် ဂရပ်ဖစ် ငါတို့မှာဒီလိုရှိတယ်
3. ဖိုင်ထဲမှာ config.wtf WoF ၏ WTF ဖိုင်တွဲတွင်တည်ရှိပြီးအောက်ပါလိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်။
gxApi "OpenGL" သတ်မှတ်မည်
ဒီလိုင်းကဖောက်သည်ကို DirectX မဟုတ်ဘဲ OpenGL ကိုသုံးမည်ဟုသတ်မှတ်သည်။
4. အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်ကိုဖွင့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ဒီဂိမ်းကိုဖွင့်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါတယ်။ အနည်းဆုံးကွန်ပြူတာနှစ်လုံးမှာကျွန်တော်နှင့်အတူရှိနေသည်။ ၄ င်းသည် client ကိုဖွင့်ရန်နှောင့်နှေးသည် ၄ ​​မိနစ်အထိ။
WoW even ပင်လျှင်ပိုလျှံသောအရာများသည်နာကျင်နေကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်
ကစားခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောအချိန်ရရှိခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀၊ အလုပ်ခွင်၌ hehe အနေဖြင့်အနှောင့်အယှက်မပေးနိုင်သရွေ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Wine နှင့်အတူ Linux မှ World of Warcraft Pandaria ကိုကစားပါ
ငါ WLW Cataclysm WINE ကို ArchLinux ပေါ်မှာ run နေတယ်၊ ​​ဘယ်သူ့ကို Wand Mand of Pandaria ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရမလဲ။
Uff …ရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်။ အရင်က (သင်သိသင့်သည့်အတိုင်း) သည် .exe မှတစ်ဆင့်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သော်လည်းယခုခေတ်တွင်အလွန်လေးလံသည်။ ဖိုင်များကို Overwrite, မလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်မှာသင်သည် Pandaria သူငယ်ချင်းကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲရုံသာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌အသစ်ပြောင်းခြင်းသည်အချိန်ကိုမြှုပ်နှံပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောယုံကြည်မှုဖြင့်မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော့်အတွက်ဒီနည်းလမ်းကမရှိပါဘူး။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Cata ကပြproblemနာမရှိဘဲဖွင့်တယ်။
ဘာအမှားရလဲ ဘယ် distro နှင့်ဝိုင်အမျိုးအစားကိုသင်အသုံးပြုပါသလဲ။
Blizzard ဂိမ်းများသည်စပျစ်ရည်အောက်တွင်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် Linux ကိုလွယ်ကူစွာကစားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်၊ သို့သော်တရားဝင်အထောက်အပံ့မပါပဲ။
ကျွန်ုပ်သည် Starcraft နှင့်အတူထောင်နှင့်ချီသည်။ တရားဝင် Battle.net ကိုတပ်ဆင်ပြီးဒီဂိမ်းကိုပြီးပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နည်းနည်းဖြင့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
Hehehehe နှင့်ဤအဘို့ငါတို့လက်ကိုဖွင့်, ကောင်းကင်ဆီသို့ကြည့်ရှုနှင့်ဤအဘို့အမစ္စတာ Blizzard ကျေးဇူးတင်! 😀
စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည် World of Warcraft Pandaria ၏ Mists သို့မဟုတ် WoW MoP ဖြစ်ပြီး Master of Pandaria ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
hehe နည်းနည်းအမှား။ ငါ 'panda' သို့မဟုတ် 'WoW Panda' လို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ နာမည်အပြည့်အစုံကိုပြောခြင်းမရှိသဖြင့်အမှား hence
ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခု .. Linux အတွက်ဘယ်နေရာမှာ Wow Said ရနိုင်မလဲ။ (ငါ Linux အတွက်အသစ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်တစ်ပတ်သာရှိသည်၊ အလွန်ကောင်းသည်)
၀ င်းဒိုးမှသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးတွင်ကစားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကစားသည်။ ယခုတွင်၎င်းသည် Linux တွင်ကစားသည်။ Linux တွင် WoW တပ်ဆင်ထားသည့်ဖိုင်တွဲကိုရှာဖွေပြီး Wow (သင်ခန်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းထည့်သွင်းထားရမည်) နှင့်ဖွင့်ပါ။ Wow.exe (သို့) WoW.exe ဟုခေါ်သော executable ။
ဟေ့၊ အသုံးပြုသူများကို Fedora, Red Hat, Centos, Bla bla bla၊
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်လုပ်သမျှအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးမှအဆင့် ၄ သို့ရောက်ပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ Warcraft ကိုဖွင့်ပြီးအကောင့်ထဲကို ၀ င်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးတဲ့အခါအောက်ခြေလိုင်းကအပြည့်အဝမ ၀ င်ခင်အထိ ၀ င်လာလိမ့်မယ်။ ငါရတယ် - အမှားနံပါတ် ၁၃၂ နှင့်အခြား။ မှတ်ဉာဏ်ကိုမဖတ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မည်သို့ကူညီရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Choqok ၁.၆ မိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ဖောက်သည်ရရှိနိုင်သည်
ဖိုင်စနစ်ကို "/" မှဘယ်လိုပြောင်းလဲ၊